बजेट सक्न रातारात विकास – Yug Aahwan Daily
बजेट सक्न रातारात विकास
युग संवाददाता । २९ असार २०७७, सोमबार १०:०६ मा प्रकाशित
जिल्लाका तिलागुफा नगरपालिका वडा नं. १ स्थित कालिका आधारभूत विद्यालयको दुई कोठे भवन असार मसान्त लाग्दा पनि भर्खरै पिल्लर हाल्न थालिएको छ । संघीय सरकारको बजेट ढिलो अख्तियारी आएको र स्थानीय सरकारले योजनाको सम्झौता ढिलाइ गर्दा जेठमा सम्झौता गरेर बजेट सक्नकै लागि असारमा धमाधम काम गर्न थालिएको हो ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त १५ लाख बजेटमा निर्माण हुन लागेको उक्त दुई कोठे भवन असारको अन्तिम सातामा पिल्लर मात्र हालिएको छ। स्थानीय ४० जना मजदुर तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका मान्छे रातारात काम गरेर भए पनि निर्माण गरिसक्ने योजनामा छन् । ‘आफ्नो विद्यालयमा बजेट आएको बैशाखको अन्तिममा थाहा भयो। प्रक्रिया पुगाएर जेठको १८ गते मात्र सम्झौता गरियो ।
लकडाउनको समय भएकाले भवन निर्माणमा आवश्यक सिमेन्ट सरीया ढुवानी गर्न ढिलाइ हुँदा असारबाट मात्र काम सुरु गरियो’, विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मनबहादुर बुढाले भने, ‘अहिले पिल्लर हाल्दैछौँ । र त दिन काम गरेर भए पनि साउन महिनाको ५ गतेभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ । नगरपालिकाका प्राविधिकले जसरी भए पनि काम सक्नुस् भनेका छन् ।’ रास्कोट नगरपालिकामा निर्माण हुन लागेको रास्कोट रंगशालाको असार १ गते उपभोक्ता समिति चयन गरियो ।
विवादै विवादमा बनेका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सचिव, कोषाध्यक्ष लगायत पूरा समिति बनाउन एक हप्ता लाग्यो । असार १० गते मात्र उपभोक्ता समितिले पूर्णता पायो र ११ गते नगरपालिकामा योजनाको निर्माण सम्झौता भयो । कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तरगत आएको सो आयोजना एक करोड खर्च गर्नुपर्ने छ । असार ११ गते सम्झौता भएर १५ गतेबाट काम सुरु गरिएको रंगशालाको असार मसान्तसम्म एक करोड खर्च गरिसक्नु पर्ने छ। एक करोड सकाउनकै लागि रातदिन नभनी काम भइरहेको छ ।
दश दिनमा एक करोड खर्च गर्दा योजनाको गुणस्तर कस्तो बन्ला ? गत वर्ष पनि रंगशाला निर्माणका लागि आएको एक करोड जनताको आँखामा छारो हालेरै सकिएको स्थानीय बताउँछन् । ‘गत वर्ष स्काभेटरले काम गरेर कामदारको नक्कली हाजिर देखाएर उपभोक्त्ता समितिका अध्यक्ष र पधाधिकारिले कामै नगरी एक करोड रकम झ्वाम पारेको उनीहरुको आरोप छ । यसपालि पनि गर्त वर्षकै रित दोहोरिने स्थानीय रनबहादुर बमको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले जग्गा त दियौं तर, समितिमै राखेनन् डोजरबाट काम गरेर कामदारको नक्कली सूची बनाएर पैसा खाए, नेकपाका सांसद र नेताका नजिको हुँ भन्दै यसपालि पनि त्यही गरे ।
एक करोड सकाउनकै लागि रातदिन नभनी काम भइरहेको छ । दश दिनमा एक करोड खर्च गर्दा योजनाको गुणस्तर कस्तो बन्ला